Thursday, 10 December 2009 - Posted by Shwe Thiri Khit
I’ve been quite busy lately with work and related family visiting, hence my lack of news here! I will haveafew things to show you this week, but let’s start with some photos of Kachin State where North in Myanmar.
ခုတလော အလုပ်တွေနဲ့ရှုပ်နေတာတွေရော အမျိုးတွေဆီ အစုံလည်ပတ်နေတဲ့အတွက် ပုံတောင်သိပ်မရေးဖြစ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်လည်းရောက်နေတဲ့အတွက် အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း online သိပ်မ၀င်ဖြစ်တော့ blog လည်းမရေးဖြစ်ဘူးပေါ့။ ဒီနေ့ ခရီးသွားပုံလေးတချို့ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Inndawgyi Lake (Kachin State)
City of Myitkyina
ပုံတွေအများကြီးကို ကျန်ပါသေးတယ်။ နောက်နေ့တွေမှာဆက်တင်ပါဦးမယ်။
လာမယ့် blog မှာ အင်းတော်ကြီးအိုင်အကြောင်းရဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်ပုံတွေ အိုင်ကြီးရဲ့အောက်မှာ ရှေးဟောင်းရွာကြီးရှိတာတွေနဲ့ ခရီးသွားအင်မတန်မှကြမ်းတမ်းလွန်းတာတွေကို အသေးစိတ်နောက်နေ့တွေမှာ ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ လာလည်သူ အပေါင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် post အောက်တွေမှာ comment လေးတွေပါ ရေးပေးသွားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
4 cups of tea:
Linn Htet Maw on 14 December 2009 at 18:25
Linn Htet Maw on 14 December 2009 at 18:29
မြတ်မွန် on6January 2010 at 12:30
ညီမလေးရဲ့ Digital Art တွေကို အရင်ကတည်းက သဘောကျခဲ့တာပါ။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ အနုပညာနဲ့ စွဲစွဲမြဲမြဲ ရှေ့ဆက်နေလို့လည်း လေးစားမိပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ခရီးက ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း သဘောတကျ ငေးကြည့်သွားပါတယ်...
ရွှေပြည်သူ on 15 January 2010 at 00:26